Ciidamada Maamulka Somaliland oo qabtay Idaacad Jahawareerisay Maamulkaasi mudo badana Baadi goob loogu jira - Wargeyska Faafiye
Ciidamada Maamulka Somaliland oo qabtay Idaacad Jahawareerisay Maamulkaasi mudo badana Baadi goob loogu jira
Ciidamada Booliiska Maamulka Somaliland ayaa xalay gacanta ku dhigay Idaacad FM ah oo xiliyada habeenkii si weyn looga dhageesan jiray Magaalada Hargeysa , waxaana Idaacadan mudo baadi goob ugu jiray Ciidamada Amaanka.
Taliyaha Booliska Somaliland Jen. C/llaahi Fadal Iimaan oo la hadlay Warbaahinta ayaa sheegay in Ciidamada Booliiska gacanta ku dhigeen Idaacad si sharci daro ah uga hool galeysay Magaalada Hargeysa mudo badana baadi goob loogu jiray.
Idaacadan FM-ta ah ayaa mudo shan bilood waxa ay si qarsoodi ah uga howlgaleysay Magaalada Hargeysa , waxa ayna Idaacadan inta badan soo gali jirtayXiliyada Habeenkii iyadoona dhoor saacadood ay hawada ku jiri jirtay.
Howlgal ay ciidamada ammaanka xalay ka sameeyeen xaafada October ee magaalada Hargeysa ayey ugu suurto gasho baaris dheer kadib in aysoo qabtaan Idaacada FM-ta iyo dhoor qof oo xiligaasi ka howlgalayay.
Somaliland ayaa inta badan cadaadis saarta Saxaafada Madaxa banana ee ka howlgasha Deegaanada Maamulkaasi , waxaana ku yar Deegaanada Somaliland Idaacadaha iyo Telefishinada Madaxa banaan .
Recent PostsBoqorka Sacuudiga oo wiilkiisa ka dhigay dhaxal sugeDaawo VIDEO : ‘Gaajo ayuu u dhintay wiil aan dhalay oo shan jir ahaa’Ahmed Kathrada, ninkii la xirnaan jiray Mandela, oo dhintayGeneral favors more aggressive approach in SomaliaUNHCR oo dalbatay baaritaan laagu sameeyay qaxootigii Soomaalida ee Yaman lagu laaayay.Editor’s Pick . Telefoonkii Hitler oo $243 kun oo dollar lagu iibsaday.43Random Poststhe Mexican Narco-State 43 student missingDF: "Liido ammaankeed ayaan sugaynaa".Puntland oo Galgala gaysay ciidamo badanRa’iisul wasaaraha oo ka hadlay abaaraha dalka ka jira.Somalia charts new course in battle against piracy.